I-Redmi 7A: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa okusemthethweni | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Kwiiyure zokugqibela bekukho ukuvuza okuninzi, ezinye zazo ziqinisekisiwe nguXiaomi, kodwa okokugqibela umzuzu ufikile. I-Redmi 7A sele ihanjisiwe ngokusemthethweni. Yifowuni entsha yophawu, efika kwiintsuku ezimbalwa emva kokuba inkampani inikezele Inqaku lakho leRedmi 7S eIndiya. Yintoni esinokuyilindela kule fowuni intsha?
Sijongene nemodeli efikelela kwinxalenye esezantsi yoluhlu oluphakathi. Inikwe njengenketho elungileyo kweli candelo, ixabiso elifanelekileyo lemali. Ndiyathemba ukuba le Redmi 7A iyakuthengisa kakuhle ekufikeni kwayo ezivenkileni.
Uphawu ligcine izinto ezininzi kule fowuni esikubonileyo kwisizukulwana esidlulileyo. Nangona bekwasishiya nothotho lokuphucuka kuyo. Zonke ziyilelwe ukunika ukusebenza okungcono kwifowuni, njengokunyuka kwesixhobo sebhetri, umzekelo.
1 Ukucaciswa kweRedmi 7A
Ukucaciswa kweRedmi 7A
Kwinqanaba loyilo, le Redmi 7A ayitshintshanga kakhulu nokuba, Xa kuthelekiswa nezizukulwana zangaphambili kolu luhlu lweefowuni. I-brand ikhethe uyilo oluqhelekileyo kwifowuni. Basishiya neefreyimu eziphezulu neziphezulu ezikwisikrini. Ke akukho mkhondo wenotshi okanye olunye uhlobo lwezinto kule ngqiqo. Le yinkcazo yefowuni:
Bonisa: 5,45-intshi LCD / IPS kunye HD + isisombululo (1440 x 720 pixels)
Inkqubo: I-Qualcomm Snapdragon 439
Ukugcinwa kwangaphakathi: 16/32 GB
Ikhamera esemva: 13 MP
Ikhamera yangaphambili: 5 MP
Inkqubo yokusebenza: I-Android Pie 9.0 ene-MIUI 10
Ibhetri: 4.000 mAh ngentlawulo eyi-10W
Ukunxibelelana: I-WiFi 802.11 a / c, iBluetooth 4.2, i-microUSD, i-4G Volte, i-GPS, iSIM ezimbini
Abanye: Ukwamkelwa kobuso, i-3,5mm Jack, iRadiyo engenazingcingo ye-FM, iSlash Spistant
Imilinganiselo: 146,30 x 70,41 x 9,55 mm
Uyilo luqhelekile kumanqanaba alula kwi-Android. Nangona kwezi nyanga sikwazile ukubona iimveliso zeefowuni ezininzi ezikhethe ukusebenzisa inotshi kwinqanaba eliphantsi okanye eliphakathi. Kodwa kule Redmi 7A sisafumana uyilo oluqhelekileyo, kunye ne-18: 9 screen ratio. Nangona iifreyimu eziphezulu nezisezantsi zibhengezwe kakhulu kwifowuni. Isikrini asongezi kwimo yezikrini ezinkulu, ezinkulu kunee-intshi ezi-6, nokuba. Kule meko iyasilela, kwi-5,45 ye-intshi ngobukhulu.
Ibhetri yenye yeendawo ezomeleleyo kwiRedmi 7A. Uye wanda kakhulu, ukubheja kule meko kwi-4.000 mAh. Ngaphandle kwamathandabuzo ithembisa ukuzimela kakuhle kwifowuni yohlobo lwesiTshayina. Ifowuni ikwasishiya nekhamera enye kwicala ngalinye. Njengoko kuqhelekileyo kula mabakala, asinaso isivamvo somnwe. Endaweni yokuba inkampani ikhethe inzwa eyaziwayo yobuso, ebekwe kwikhamera yefowuni yangaphambili. Olunye ukomelela kwesixhobo kukuchasana nokutshiza. Umsebenzi oqinisekileyo wokuxabiseka ngokuqinisekileyo.
Abo banomdla wokuthenga le Redmi 7A lo inokufumaneka ngemibala emibini eyahlukeneyo, esinokuyibona efotweni. Kukhutshwa ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka nomnyama. Kwakhona, sineenguqulelo ezimbini zefowuni ngokwe-RAM kunye nokugcinwa. Inye ene-2/16 GB enye ine-3/32 GB, ukuze ube nakho ukukhetha elifanele imeko nganye. Zombini ezi nguqulelo zinokwandiswa nge-microSD.
Okwangoku asinalo ulwazi malunga nexabiso lale Redmi 7A. Ngethamsanqa, ngekhe silinde ixesha elide de sifumanise. Kuqinisekisiwe ukuba nge-28 kaMeyi, ekunikezelweni kweRedmi K20, siya kuba nale datha ngokusemthethweni. Ngokuqinisekileyo, kuya kuba kulo msitho xa kuya kuxoxwa ngawo xa le fowuni iza kuphehlelelwa kwintengiso. Kuba ngalo mzuzu asinalo ulwazi malunga noku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » I-Redmi 7A yaziswa ngokusemthethweni